Abiy Ahmed iyo Ethiopia oo dhabarka xijiyey Farmaajo iyo Soomaaliya (Warbixin) - Caasimada Online
Home Warar Abiy Ahmed iyo Ethiopia oo dhabarka xijiyey Farmaajo iyo Soomaaliya (Warbixin)
Abiy Ahmed iyo Ethiopia oo dhabarka xijiyey Farmaajo iyo Soomaaliya (Warbixin)
Addis Ababa (Caasimada Online) – Soomaaliya ayaa Khamiistii looga adkaaday tartan ay u gashay inay xubin ka noqoto Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika kadib doorasho ka dhacday magaalada Addis Ababa ee xarunta ururka.
Soomaaliya ayaa kursigan kula loolantay Jabuuti oo heshay 19 cod halka Soomaaliya ay ka heshay 13 cod. Jabuuti ayaa kursigan ku fadhin doonta illaa sanadda 2025.
Hase yeeshee, codeynta ayaa waxaa kasoo baxday arrin yaab leh kadib markii Ethiopia ay u codeysay Jabuuti. Ma ahan kaliya in Ethiopia ay u codeysay Jabuuti, ee waxay sidoo kale u gashay olole xooggan oo ay dalalka kale taageero uga raadisay.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya ayaa ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu ugu yeeraa “walaalkey” waxayna dowladda federaalka ay marar badan Ethiopia ku garab istaagtay masraxyo caalami ah.
Waxaa ugu dambeeyey oo ay Soomaaliya kasoo horjeesatay codeyn uu Golaha Xuquuqda Aadanaha QM u qaaday ku anisixiyey abuuritaanka guddi khubaro ah oo caalami ah oo baaritaan ku sameeya tacaddiyada xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya, taasi oo Farmaajo uu ku garab istaagay “walaalkiis” Abiy Ahmed.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa sidoo kale dhowaan sheegay in Farmaajo uu diiday in diyaarad militari oo Masar ay leedahay ay gargaar caafimaad usoo qaado Soomaaliya, isaga oo ka cabsi qaba in Abiy Ahmed u arko inuu xulufo la yahay Masar.
Haddii Farmaajo uu gaaray in xitaa gargaarkii Soomaaliya uu u diido cabsi uu ka qabo Abiy iyo inuu lumiyo saaxiibtinimadiisa, Abiy kama gaban inuu eego danta dalkiisa uuna taageero Jabuuti.
Jabuuti iyo Ethiopia ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan ayada oo inta badan badeecadaha dalka Ethiopia la geeyo ay kasoo degaan Jabuuti, sidaas darteedna Abiy wuxuu Jabuuti u arkaa inay uga muhiimsan tahay Soomaaliya. Sidaas darteed Abiy Ahmed wuxuu eegtay dantiisa.
Balse su’aasha is-weydiinta mudan ayaa ah danta ay Abiy iyo Ethiopia u hayaan Soomaaliya ee Farmaajo mar walba u garab taagan yahay, marka laga reebo inuu doonayey in ciidanka Ethiopia ay ka caawiyaan inuu dalka ku qabsado balse ku fashilmay.
Abiy wuxuu Farmaajo tusay qiimahiisa, Farmaajo ma leeyahay indho kuu arko.